Usuku oluhle kakhulu lwe-24 Day Of Tattoos Dead Uyilo loBantu kunye nabasetyhini - Tattoos Art Ideas
Usuku oluhle kakhulu lwe-24 Day Of Tattoos Abafileyo Ukuyila Iingcinga Kwabesilisa Nabasetyhini
Ngaba ubonile abantu abanolu hlobo lomhla we tattoo? Kuyo yonke loo minyaka, abaninzi abantu abatsha kumbandela wenkinga ye tattoo abafileyo babengenakunqwenela ukukhupha imifanekiso yabo.
Usuku lwabaThambo abafileyo lithetha ukuthetha ngezinto ezininzi. I tattoo ibonisa ezinye izibilini ezintle ezithetha ngabathandekayo abalahlekileyo. I tattoo ingasetyenziselwa ukuthetha ngokukhunjulwa, ukufa, umphefumlo, ukubuya, eMexico, ngokomoya kunye nokubuyela. Usuku lwabafileyo lungasetyenziselwa ukubhiyozela abahlobo kunye namalungu entsapho kufuneka ukuba adlule. Kwinkcubeko yaseMexico, yinto ethandwayo.
Usuku lwabafileyo abaThattoos Ukuthayisana kuyahluka ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zoSuku lwabafileyo kunye neentsingiselo zabo. Ingcamango yokuba Usuku lwabafileyo lithetha ukufa ngabantu abaninzi abanokuthi banyanisekile ngakumbi xa bethatyathwa ngesikhombiso esikhulu. Usuku lwabafileyo luyakuthatyathwa ngeendlela ezininzi kwaye zigqitywe ngeentsingiselo ezinkulu ozithandayo. Usuku loT tattoo luyakhumbuza umntu ofa kwaye nokuba sonke sifanele siphila lo mphefumlo ngokuzeleyo. Imilo yoSuku lwabafileyo nayo ineentsingiselo zayo ngokokufunayo.
1. Usuku Lwe-Tattoo Design Design
2. Usuku Lwesandla Lwabafileyo Abafileyo
Namhlanje, sibona inani elikhulu labantu baphenduka ngokukhawuleza nge-#day #of #the #dead tatto designs.
3. Umlenze womhla we tattoo
Ukufumana lo mhla wokufa #tattoo uye waphendukela ezininzi izidumbu kwisiqwenga sobugcisa. Awunakuphika ukuba le tattoo inento ekhethekileyo ngayo.
4. Usuku olunamandla lwe tattoo efile
Xa abafazi bethola umhla wokufa, bavakalelwa ngolu hlobo lofezekiso. Uyithanda njani lolu hlobo lwe tattoo oluye lelinye le tattoo eligqibeleleyo kunazo zonke.
5. Usuku oluhle lwe tattoo efile
Siye sabona abantu ababethelela ukufika kwimihla yokufa kwe tattoo kuba bebengakulungele ukuba nalo. Khangela le tattoo uze usitshele ukuba uthathe ingqalelo.
6. Usuku lwe tattoo efile
Kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni ufanele ube nalo mhla omangalisayo we tattoo efile. Jonga kakuhle kwaye ubone okusemandleni onokuzifumana.
7. Usuku losuku lwe tattoo efile
Kukho imilo emininzi yosuku lwe tattoo efile njengale. Awuyithandi na uhlobo lo tattoo? Amantombazana aya kuthanda ngakumbi.
8. Usomangalisa umhla we tattoo efile
Umhla we tattoo ofile uyenye uhlobo lwe tattoo ongenakukunyamekela entanyeni yakho. Yenza ingxolo eninzi ngaphambi kokuba ukhulume.
9. Usomangalisa umhla we tattoo efile
Kukho iindlela ezininzi zokwenza usuku lwakho olumangalisayo lwe tattoo efile. Ingaba uyintombi okanye indoda, le tattoo ihlombe ipholile.
10. Umlenze wangemva komhla we tattoo efile
Amadoda sele aqalise ukusebenzisa umlenze wempuphu yomhla we tattoo efile. Ukuba ulungele le tattoo, kuya kuba lula kuwe ukuba utshintsho oluya kutshintsha indlela obukeka ngayo.
11. Umhla wokugqibela we tattoo efile
Ingaba uyindoda okanye ibhinqa, kubalulekile ukuba unayo tattoo yangaphambili eya kubonisa ngesibindi usuku lwakho lomhla wokufa.
12. Usuku lovulo lwe tattoo
Umhla wempuphu we tattoo efile uyenye yintando ye tattoo oya kuhlala uthanda ukuba nayo. Uyakuyixabisa ngokwenene.
13. Ubomi nemini ye tattoo efile
Yiza phezu kwamantombazana uze ubone indlela enhle ngayo le tattoo eyilwe ngayo ngasemva. Usuku lwe tattoo olufileyo lungabonakala lukhangeleka xa ubomi bongezwa kulo njengaye.
14. Usuku oluqhenqileyo lwe tattoo efile
Inks eluhlaza kunye neyibhakabhaka kunzima ukukususa kodwa akufanele kube yinkinga xa ucinga ukufumana usuku lobuqili lwe tattoo efile njengale.
15. Usuku olupheleleyo lwesifuba som tattoo ofile
Umhla wokubuyela emva we tattoo ofile upholile kwaye ukuba ufuna indlela yokuma ngaphandle kwesihlwele, kutheni ungayitholi le tattoo ehlotshisiwe kuwe?
16. Usuku lomculo we tattoo efile
Umhla we tattoo oye waba yiloo nto umntu onokuyithanda ukuba ngowona xa umculo ungeniswe kuwo.
17. Usuku olumnandi lwe tattoo efile
Ukwenziwa ngokwezifiso komhla wokufa kwe tattoo kuhamba kwelinye nqanaba. Kutheni ungafumani usuku olupholileyo lwe tattoo efile njengale? Akunakubiza imali eninzi ukuyifumana.
18. Usuku oluthandwayo lwe-tattoo efile
Nguwe omele ulungelelanise uhlobo lomhla wokufakela umdwebo we tattoo oyifunayo. Ngokubhekiselele ekubeni nomhla we tattoo efile, nabani na onokukwazi ukwenza oku.
19. Usuku oluhle lwe tattoo efile
Akuyiyo nje into eyenziwe yosuku oluhle lwe tattoo efile onokuyifuna. Umbala osetyenziswayo yinto ekufuneka uyenze ingqalelo kuqala ngaphambi kokuba uhambe umboniso othandekayo njengaye.
20. Umhla wempuphu opheleleyo we tattoo efile
Ukuba ngethuba ukuba umbala we tattoo awunzima xa ukhangele umhla ogcweleyo we tattoo, ufanele uthabathe ixesha kwaye ufumane omnye wabanonobumba abathandekayo abanokukunceda ngale tattoo
21. Usuku lwe tattoo efile
Umdwebi womnxeba onokwenza umzobo wakho we tattoo yiyona nxalenye ebalulekileyo kwanoma yimuphi umhla we tattoo efile. Kwimeko apho umculi wakho ongeyonto elungileyo, awukwazi ukufumana le tattoo njengendodakazi.
22. Umbala omninzi we tattoo efile
Kukho abaninzi bee-tattoo kwi-intanethi ukuze ukhangele kwaye ufumane lo mhla wemibala ebomvu ye tattoo efile. Konke oku kuthatha ixesha elincinane kwaye yonke imbali.
23. Usuku lomfazi we tattoo efile
24. Usuku lwe tattoo efile kumagxa amabhinqa
utywala tattoodesign mehndicute tattoostattoos zohlangaiifoto eziphakamileyoIintliziyo zeTattoostattoos kubantuowona mhlobo womhlobozinyonitatna tattooizigulaneizithunywa zezulutattoosiifotto zentamotattoos ezinyawoukutshiza amathambotattoosibiniicompass tattootattooi-tattoostattoo engapheliyotattoos kumantombazanaiidotizomculo tattoosiifatyambo zeentyatyambotattoosiimpawu zezodiac zempawui tattooIintyatyambo zeTattootattobathanda i tattoosIndlovu yeendlovuihoi fish tattootattoosngesandlatattoos zelangai-cherry ityatyambotattoos zenyangangombonotatto tattoostatto flower flowerizifuba zesifubatattoo yedayimaniI-Ankle Tattooszengalo zengalotattoo yamehlotattoosiipattoosTattoos zeJometri